घटाउनै गाह्रो भो ! - Fitkauli
आफ्नो पेटको मात्रै त त्यत्रो विकास गर्नेले अन्य अझ के के विकास गर्छ होला ? देख्दै मरनच्याँसे मान्छेलाई कसले पो गन्छन् र ?
हैन सबै कुरा घटाउन त निकै फटाफट हुन्छ । सटासट हुन्छ । जोड्न, माथि उकालो उक्लन पो गाह्रो हुने हो । यो शीर्षक नै सरासर गलत हो भन्न पनि पछि नपर्नुहोला । हो तपाइँहरुलाई जस्तै मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ । इज्जत घटाउन पर्‍यो भने एक मिनेट नै काफी हुन्छ । कुनै सार्वजनिक स्थलमा केही नराम्रो व्यवहार गरे भैगो । सम्पत्ति घटाउन छ भने एक साँझ साथीभाइहरु जम्मा गरेर कतै रमाइलो गरे भैगो ।
परिवारका सदस्य घटाउन छ भने वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिए भो । देशको जनसंख्या नै घटाउन छ भने पनि विवाह गर्नुभन्दा पहिला नै परिवार नियोजनको स्थायी उपाय अपनाए हुन्छ । नेता र नेत्रीहरुको संख्या घटाउनु पर्दा मुलुकमा एकदलीय निरंकुश शासन चलाए हुन्छ । कलाकार र साहित्यकारहरुको जमात घटाउनु पर्दा उनीहरुको कला र गलालाई वास्ता नगर्ने, कसैले कसैको रचना नछाप्ने, नसुन्ने अनि कार्यक्रमहरुका कसैलाई नबोलाए भो ।
बल्ल-बल्ल अलिअलि हुन लागेको सिङ्गो मुलुकको विकास घटाउन चाहने हो भने अहिलेको अवस्था जस्तै सबै मिलेर केही काम नगर्ने अल्छी जागिरमा पेन्सन पकाएर अलि अलि गर्न खोज्नेहरुको खुट्टा तान्ने र तथानाम गाली गरे भैहाल्छ । जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र भनेर पीर लागेको छ भने पनि केही टेन्सन लिनुछैन । पहिले जस्तै अहिले पनि बाँकी रहेका दुई/चार वटा ठूला नदी छिमेकी मुलुकलाई उपहार दिए भैगो ।
हो साँच्ची निकै कुराहरु घटाउन ज्यादै सजिलो हुन्छ । पढ्ने रहरलाई घटाउन पर्दा अहिले जस्तै पढेकालाई कुनै मान्यता नदिने अनि बेरोजगारीको दर बढाइदिए हुन्छ । महिलाको जनसंख्या घटाउन परे तीन महिनामा नै भ्रुण एक्स.एक्स थाहा भएपछि एबर्सन गरे भो । त्यस्तै पुरुषको संख्या घटाउन पर्दा पनि तीन महिनामा नै भ्रुँण एक्स वाई थाहा हुनासाथ एवर्सन गरे भो । कति सजिलो छ है सबै कुरा घटाउनलाई । केही बेरमा नै आमूल परिवर्तनको लागि अथाह शक्तिलाई हटाउनको लागि ।
म अनुमान लगाउँछु । यसरी एकैछिनमा, एकै दिनमा फटाफट, सजिलै घटाउन र हटाउन मिल्ने कुराहरुको बारेमा म भन्दा निकै गुणा बढी हजुरहरु नै पोख्त हुनुहुन्छ । अब भने मैले यहाँ यस्तो चिज जुन घटाउन भने तपाइँ हामी मात्र होइन, सिङ्गो मुलुक मात्र पनि होइन, सिङ्गो विश्व नै लाग्दा पनि अँ हँ पटक्कै सफल हुन सकेको छैन । निरन्तर प्रयास जारी छ तर ठ्याक्कै सबैलाई मेलखाने सूत्र, औषधी भने फेलापरेको छैन ।
त्यस्तो घटाउन निकै गाह्रो हुने कुरो अरुबाट भन्दा आफ्नै नै गर्दा मनासिब होला । त्यो कुरो म सोर्‍ह वर्षको हुँदा चालीस किलो थियो । त्यही कुरो म बत्तीस वर्षको हुँदा असी किलो पुग्यो । अब मैले सजिलै अनुमान लगाएको छु कि अब म चालीस वर्ष पुग्दा त पक्कै एक क्विन्टल नाघ्नसक्छ । अचम्मको छ क्या यसको बढाइ । न त अंकगणितिय अनुपातमा मिल्छ न त ज्यामितीय अनुपातमा नै ।
मेरो मात्र होइन अनि तपाइँहरुको मात्र पनि हैन । सारा विश्वका मानव जातिहरुको यो कुरै मेरो जस्तै बढेको हुन्छ । कसैको मेरै अनुपातमा बढेको हुन्छ त कसैको केही घटीबढी पनि हुनसक्छ । जब जब मानिसले मेहनत गर्न छोड्छ । अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्न छोड्छ । त्यो समयमा घट्ने कुराहरु धेरै हुन्छ । बुद्धि घट्छ । जब बुद्धि नै घट्छ त्यो बेला व्यक्तिको इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पूँजी लगायतका धेरै कुराहरु सजिलै निकै छिटो घट्छ । उल्लिखित सबै कुरा एकै पटक खट्दा पनि त्यो मैले भन्न खोजेका घटाउन गाह्रो हुने कुरो भने झ्याप्पै बढ्छ । पचास केजीको भए सत्तरी केजी, अनि सत्तरी केजीको भए एक क्विन्टल, झ्याप्पै बढ्छ क्या । नेप्सेको उकालो भन्दा पनि बढी ठाडो गरी ।
सबैमा यो घटाउन गार्‍हो हुने कुरो बढेको निकै फाइदाजनक हुन्छ । पशुपंछीहरुको तौल बढाउन विभिन्न भिटामिन लगायत अन्य गतिविधि प्रयोग गरिन्छ । किनकि उनीहरुको जति बढि केजी तौल हुन्छ उती नै बढी पैसा पर्छ । त्यस्तै तरकारी, बोटविरुवा लगायतमा पनि यो नियम लागू हुन्छ । जति बढी तौल भयो उति नै बढी महत्व हुन्छ । उती नै बढी आम्दानी हुन्छ । कसले कति केजी बढाउने, कसले कति केजी फलाउने भन्नेबारे प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । आफूले बढाएको, आफूले फलाएको बढी तौल भएको चीजको विज्ञापन गर्न बेला बेलामा प्रदर्शनी नै आयोजना गर्ने गरेका छन् ।
अचम्म त यो कुरो मानिसकै सवालमा देखापर्‍यो । जब थाहा नपाइकन, नचाहँदा नचाहँदै पनि झ्याप्पै बढ्न थाल्छ अनि यसले मानिस भित्रका भएका राम्रा कुरा जति घटाउन र नराम्रा कुरा सबै बढाउन थाल्दछ । उदारहणको लागि मानिस मोटाउन थालेपछि बुद्धि घट्छ, विवेक शुन्य हुन्छ, जाँगर र फुर्ति घट्छ, आयु घट्छ … यस्तै यस्तै धेरै कुराहरु घट्दछ । त्यस्तै बढ्ने कुराहरुमा पेट बढ्छ, रोग बढ्छ, भोक बढ्छ, शोक बढ्छ….आदि आदि धेरै कुरा बढ्छ । यत्तिमात्र कहाँ हो र हजुर दिनदिनै जोइपोईको काममा सरिक हुँदा पनि एक अर्कामाथि भार बढ्छ ।
यो घटाउन गाह्रो हुने कुरो घटाउनको लागि सबैले निकै प्रयास गरिरहेका छन् । स्वदेश, विदेश यत्रतत्र सर्वत्र यही बारेमा अनुसन्धान भैरहेको छ, प्रयोग भैरहेको छ अनि आविष्कार पनि गरेको गर्‍यै छन् । कुनै देशले कपडाको उद्योग नै खोलेका छन् । हामीले सुनिरहेका छौ, हामीले किनिरहेका छौ स्लिम बेल्ट, चिलिम बेल्ट । यसको नाम त स्लिम बेल्ट नै हो तर स्लिम हुन भनेर ऋण खोजेर बल्ल बल्ल बेल्ट किन्यो तर के को स्लिम हुनु नि त्यसैले चिलिम बेल्ट भन्दिएको ।
कुनै देशले विभिन्न औषधीहरु बनाइरहेका छन् । मानिसहरु खाना खाने पैसा भन्दा बढी त्यही मासु घटाउन भनेर उत्पादन भएका कुराहरु किन्नमा खर्च गरिरहेका छन् । मलाई नै सोध्नुभयो भने पनि बाबुको जेथाको एउटा घर थियो बजारमा । मापदण्ड अनुसारको उचाइ र मोटाइ मिलाउने चाहनामा उत्पादन भएका जति सबै चिजको प्रयोग गर्दा गर्दै त्यो घर बेचेर सकियो ।
मेरो मात्र होइन हजुर मेरी उनीले त झन् हामीले सुनिरहेका सिक्स प्याक मात्र होइन, हन्ड्रेड भन्दा बढी प्याक किनिसकिन् । स्लिम र ब्यूटिफुल हुने भन्दा अन्य तिनको कुनै धन्दा नै छैन । एकाबिहानै देखि साँझसम्म जम्मा पचासवटा त स्लिम बेल्टको प्रयोग गर्छिन । दाइजो ल्याएको र मसँग कमिसन खाएको करिब पचास लाख भन्दा बढीको ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो शुरुमा । अहिले त पचार हजारमा झर्‍यो बूढो भन्दै थिइन् आज बिहानै ।
तपाइँहरु आफै भन्नुहोस् न । हामीहरुले के नै पो गर्न बाँकी छ र यो शरीरमा लाएको मासु घटाउनलाई । विहानै उठेर आँखा मिच्दै मनिङ वाक पनि गएकै छौँ । दाल, भात खाँदा बोसो लाग्छ भनेर सकिनसकी मिठा मिठा कुराहरु थोरै थोरै खाएकै छौँ । नामै नजानिने के के खानामा हो कुन्नि पनि धाएकै छौँ । कुटेर बनाएका भस्म जटिबुटिदेखि लिएर राम्रा सुगन्धीत लोसनसमेत घसेकै छौँ । जानेका, भनेका र सुनेका सबै औषधी, विधि र पद्दतिको प्रयोग गर्दा गर्दा अरु सबै कुरा घटिसक्यो तर यो मासु भन्ने कुरो झन् बढेको बढ्यै छ ।
जति धेरै मासु बढ्यो उति धेरै सुख पाइने रहेछ । बुढापाकाले भन्ने गर्थे ‘बूढेशकालमा त आफ्नै आगन परदेश लाग्छ’ बाबै । के को बूढेसकाल कुर्नु नि आफूलाई त युवेसकालमा नै परदेश लाग्न थालिसक्यो । घरमा पनि गार्‍हो, बाहिर हिड्दा झन् गार्‍हो । आफ्नो त जोईपोईले नै क्विनटल हान्न थालिसकियो । घरमा डबल बेडको एउटा पलङ मात्र छ । महिलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा उनी नै सुत्छिन् । आफूलाई त उल्टोपाल्टो फेरि फेरि सुत्नुपर्छ त्यसैले बैठक रुमको भुँई नै काफी छ । बाहिर बजारमा डुल्न मनलाग्छ । आफ्नो गाडी छैन । भाडाको गाडीमा म मात्र सिङ्गल हिड्दा पनि सधँै भाडा डबल माग्छ । तजाततै फाइदा नै फाइदा हुन्छ बाबै मोटो मान्छेलाई । नेता, कर्मचारी, व्यापारी लगायत नगरिखाने मान्छेलाई पनि मोटो भएपछि निकै गतिलो छ भन्ने गर्छन् । यो मान्छे निकै ठूलो मान्छे हो भन्दछन् । सानो मान्छे भएको भए कसरी तेत्रो पेट बनाउन सक्थ्यो । आफ्नो पेटको मात्रै त त्यत्रो विकास गर्नेले अन्य अझ के के विकास गर्छ होला ? देख्दै मरनच्याँसे मान्छेलाई कसले पो गन्छन् र ?
शरीर नै मोटोघाटो भएपछि परिवारमा पनि सबैले माया गर्दा रहेछन् । छोराबुहारी, छोरीज्वाइँले मिठो मिठो भोजन खाइरहन्छन् तर हामीलाई भने सोध्दै सौध्दैनन् । आफैले भोक लाग्यो भन्दा पनि धेरै नखाइस्यो यो भन्दा मोटो हुनु झन् नराम्रो हुन्छ भन्छन् । सधँैभरि एक अर्कामा माया गर्ने जोईपोईमा पनि दुवैमा यो मासु बढी भयो भने त झन् माया ह्वात्तै बढ्दोरहेछ । उमेरकै हुँदा, संयोगले सँगै बस्दा दिन दिनै नसकिए तापनि दुई दिन बिराएर रातीमा जोईपोइको खेल खेलिन्थ्यो । आजभोलि त जोईलाई पोइको पेट ठूलो लागेर म माथि भन्छिन् त्यस्तै पोइले पनि मेरो भन्दा तिम्रो पेट नै ठूलो छ म नै माथि भनेर मायाको मिलन उमेरमै छोडिएला जस्तो छ । भएन त फसाद, यस्ता कुरा लिएर अदालत जानु राम्रो भएन ।
हजुरहरु जति सुकै आधुनिक भए पनि आफ्नो मासु सजिलै घटाउँछु भनेर फुर्ति नछाड्नुभए हुन्छ । उहिलेको पालादेखि अहिलेको पालासम्म त यसको उपचार हुन सकेको छैन भने अहिलेको आधुनिकले केही लखरपाटो लाउँदैन । नपत्याए आफ्नै छोराछोरीको तुलना गर्नुभए हुन्छ । हाम्रा भाइबैनीहरु धूलो र ढुङ्गेमाटो खेल्दा लुरा-मसिना थिए । देख्दै माखा टिपेर खालान् जस्ता । अहिलेका हाम्रा इमेल र इन्टरनेटका आधुनिक खेल खेल्दा त बार्‍ह वर्षमै पचास केजीका हुन थालेका छन् । खै कुन्नि आजभोलिका खानेकुराहरुमा त्यस्तो मलिलो कुरा के के हालेका छन् ? लौ त हजुर ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्छन् । समय क्रममा त्यस्ता मासु घटाउने कुराहरु आउलान् । तपाइँहरुले थाहा पाउनासाथ मलाई तुरुन्त खबर गर्नुहोला ।
News Views: 240
गायत्री परिरोशनी प्रकाशित मिति : वैशाख २२, २०७९
मन पर्‍यो 5
सुनिबक्स्योस् न बडामहाराज !